ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: June 2010
မြစ်တဖက်ကမ်း၌ ဖောင်များ ဆိုက်ကပ်လိုက်သည့်အချိန်မှာပင် နေမင်းသည် ရိုးမတောင်တန်းနောက်ကွယ်သို့ လုံးလုံးလျားလျား ငုပ်လျှိုးသွားချေပြီ။
မြစ်ကမ်းနဖူးရှိ တောတန်းထက်မှ အိပ်တန်းပြန် ငှက်ကျေးတို့၏ ကျီကျီကျာကျာ အော်မြည်သံများကို ကြားရပါ၏။ မြစ်တဖက်ကမ်းဆီမှာတော့ ခရီးတထောက် နားခိုခဲ့ရာ ညောင်နှစ်ပင်စခန်းကို ဆည်းဆာရိပ်တွင် ခပ်ပျပျ လှမ်းမြင်နေရသေးသည်။
“ကဲကဲ…. လူတွေ စုံမစုံ စစ်ကြဟေ့။ လက်နက်နဲ့ ရိက္ခာတွေ ကမ်းပေါ်ကို ချကြ”
မိုးချုန်းသံပမာ ကျယ်လောင်လှသော တပ်မှူးကြီး၏ အမိန့်သံကို နာခံကာ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ တာဝန်တွေကို တက်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်ကြရသည်ပ။ သည်အခိုက်မှာပင် ကမ်းနဖူးဆီသို့ မြင်းဒုန်းစိုင်းစီးလာသူ တဦးကို မြင်လိုက်ကြရသည်။
“ဟာ…. ကင်းထောက် တပ်မှူးလေး ပွေးလွင် ပါလားဟေ့၊ စစ်သတင်းထူးများ ပါသလား”
တပ်မှူးလေးပွေးလွင်သည် မြင်းပေါ်မှ ဖုတ်ကနဲ ခုန်ဆင်းကာ တပ်မှူးကြီး ခေါ်မင်နောင်ရဆွေ ၏ ရှေ့တွင် ကပျာကယာ ဒူးထောက်ခစားလိုက်ရင်း…
“မှန်ပါ။ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့၊ ဗိုလ်သိန်းစိန်တို့သည် ဆင်တပ်၊ မြင်းတပ်၊ လားတပ် တပ်မကြီး သုံးခုနှင့် မျက်နှာတူရူ ကုန်းကြောင်းက စစ်ကုန်ဖွင့်၍ ချီလာကြောင်းပါ။ ကြံဖွံ့၊ စွမ်းအားရှင်နဲ့ အမျိုးသမီးရေးရာ စစ်သည်အင်အား စုစုပေါင်းလိုက်လျှင် ကျွန်တော်မျိုးကြီးတို့ အင်အားထက် အဆပေါင်း သိန်းနဲ့ချီ၍ များပြားလှကြောင်းပါ”
တပ်မှူးကြီး ခေါ်မင်နောင်ရဆွေလည်း တပ်မှူးလေးပွေးလွင်၏ စစ်သတင်းစကားကို လည်လည်ထပ်ထပ် နားထောင်သုံးသပ်ပြီးလတ်သော်……
“အိမ်း၊ တချီတမောင်းတော့ တွေ့ကြသေးတာပ။ ကဲ…. တပ်မှူးတို့… ငါတို့ စီးနင်းလာခဲ့တဲ့ “ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း” ဖောင်တော်ကြီးနဲ့ “၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်” ဖောင်တော်ကြီးတွေကို အခုချက်ချင်း ဖျက်ကြ”
တပ်မင်းအမိန့်ကို ကြားသောအခါ “တပ်မှူး ဗညားသန်းထိန်း” က စိတ်မသက်မသာဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း အတွန့်တက်လိုက်သည်။
“တပ်မှူးကြီး… ဖောင်တွေ ဖျက်လို့ ကောင်းပါ့မလား။ ကိုယ့်အင်အားက နည်းပါးနေတော့ မတော်တဆ အရေးအရာ နိမ့်ပါးခဲ့လျှင် ပြန်ဆုတ်ရန်အတွက် ဖောင်တွေပြင် ဖို့ အချိန်မရရင် မခက်ပါလား”
ဤစကားကို ကြားသော် တပ်မှူးကြီး ခေါ်မင်နောင်ရဆွေလည်း နည်းနည်းတော့ တင်းသွားလေသည်။ အင်း….အရေးထဲ ဗိုလ်သန်းရွှေရှေ့မှာ ဖောင်ပြင် ချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ရှိသေးသကိုး။ သို့သော် အကြီးအကဲပီသစွာ ဒေါသစိတ်ကို ချွန်းနဲ့ ထိန်းအုပ်လိုက်ပြီး အောင်မြင်ခန့်ငြားသော အသံဝါကြီးဖြင့် ဤသို့ မိန့်ကြားလေသည်။
“အစ်ကိုတို့ စိတ်နှစ်ခွ မဖြစ်ကြလင့်။ သေလျှင်ရေဝေး ရှင်လျှင်ကြပ်ပြေး ဆိုတဲ့အတိုင်း စွန့်စွန့်စားစား တိုက်ကြမှသာ တော်ကာကျမည်။ စစ်တို့မည်သည်မှာ အင်အားအနည်းအများသည် ပဓာနမကျ။ လေကြောင်းအသာစီးရမှု…အဲအဲ.. လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နှင့် ရဲစွမ်းသတ္တိသာလျှင် အဓိက ဖြစ်ပေသည်”
ဤနေရာတွင် တပ်မှူးလေး စိန်လှပြူး ကလည်း မျက်နှာလိုအားရဖြင့် ကပျာကယာ….
“တပ်မှူးကြီးပြောတာ မှန်ကြောင်းပါ။ သေနင်္ဂဗျူဟာသာလျှင် အရေးအကြီးဆုံးပါ။ ဟိုသီချင်းထဲမှာလည်း ပါတယ်မဟုတ်လား။ ဘာတဲ့… သေနင်္ဂဗျူဟာ ဆိတ်၏အင်္ဂါ…တဲ့။ ရန်သူအင်အားကြီးတယ်ဆိုရင်လည်း ဘာမှုစရာလိုလဲ။ ဆိတ်ဟိုဒင်းဗျူဟာသုံးပြီး ပြေးဝင် ပူးပေါင်းလိုက်တာပေါ့” ......... ဟု ဝင်ရောက် ပြောဆိုလေရာ ခေါ်မင်နောင်ရဆွေ လည်း သူ့လူများအား စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြင့် ဟန့်တားရလေသည်။
“ဟေ့… အားလုံး အတွန့်မတက်ကြနဲ့။ ကြားဖူးတယ်မို့လား။ ခေါ်မင်နောင်ရဆွေ တဲ့။ တဆွေပဲ ရှိတယ်။ ဖောင်တွေဖျက်လိုက်ကြ။ မနက်ဖြန် ၂၀း၁၀ နာရီမှာ တိုက်ပွဲစမယ်။ ဘယ်တောင်ပံမှာ ဗိုလ်သမိန်သေဝုနဲ့ အအိုတော်ယိမ်းတသိုက်က တာဝန်ယူကြ။ ညာတောင်ပံမှာ ဗညားသန်းထိန်းနဲ့ အဖွဲ့ ။ ငါက အလည်ကြောင်းက ချီတော်မူမည်။ ငါတို့၏ ဆုံရပ်သည် ကြပ်ပြေးလွှတ်တော်။ သဘောမတူတာ၊ မရှင်းလင်းတာရှိရင် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး အဲ…ခုကတည်းက ထပြောကြ။ နောက်မှ တောင်ပြောမြောက်ပြော လျှောက်မပြောကြနဲ့။ အဲဒါ ငါလုပ်နေကျ အထာတွေကွ… ရိုး….ဟိုး…ဟိုး…နေပြီ… ဝူးထွား…ဟား….ဟား။”
တပ်မှူးများလည်း တပ်မှူးကြီး၏ စကားကို မလှန်ဝံ့သဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်… အဲလေ ဖောင်တွေကို ချိုးဖျက်၍ တိုက်ပွဲဝင်ရန် ပြင်ဆင်ကြရလေသည်။
ဤသမိုင်းနောက်ခံဝတ္ထုကြီးမှာ အချိန်နှင့် တပြေးညီတည်း ရေးသားစီရင်နေရသည်ဖြစ်၍ နိဂုံးအထိ တထိုင်တည်းရေးသားရန် ဘယ်နည်းနှင့်မျှ မဖြစ်နိုင်သည့်အလျောက် ဤမှာပင် တခန်းရပ်ပါဦးမည်။ ဤဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးလိုသူများ အမြန်ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါသည်။
အဲ…အဲ… ဘလော့ဂ်ဖတ်သူများအနေနဲ့လည်း တချိန်တွင် လိုအပ်လာနိုင်သည့်အလျောက် ဆိတ်သေနင်္ဂဗျူဟာများကို ကျေကျေညက်ညက် လေ့လာထားကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
Posted by ကိုပေါ on Monday, June 28, 2010
Labels: short story Comments: (22)
မောင်ကြီးတို့ ဘယ်ရွာသား ...
စစ်သံကြားလျှင် နာဖျားဥပါယ် ခိုကြတယ်။
စစ်သံကြားလျှင် Proposal ပိုက်ကာ
Donor ကနည်း၊ ဒေါ်လာမွဲနှင့်
စစ်မှာတမူ၊ ဒေါ်လာပေး ခိုင်းတဲ့လူကို ယူမလားတော်။
စစ်မှာယွန်းမ၊ ဒေါ်လာပြ ကြိုးဆွဲကြသူကို ရမလားတော်။
စစ်မှာဆွေမျိုး၊ ဘိုးဘွားမောင့်မှာ ရှိသလားတော်။
စစ်မှာတမူ၊ ဒေါ်လာပေး ခိုင်းတဲ့လူကို မယူဘူးဗျာ။ (သူများနဲ့ပြိုင်မလုနိုင်လို့)
စစ်မှာယွန်းမ ဒေါ်လာပြ ကြိုးဆွဲကြသူကို မရဘူးဗျာ။ (contact မရှိလို့)
စစ်မှာဆွေမျိုး ဘိုးဘွားမောင့်မှာ မရှိဘူးဗျာ။ (တပ်ထဲမှာ ဆွေမျိုးရှိရင် အခုအချိန် ပါမစ်ရောင်းစားနေပြီပေါ့ ဟဲဟဲ)
ပူးတွဲဖတ်ရှုရန်။..............။ ပွဲသိမ်းငိုချင်း (ကိုပေါ)
အိမ်မှာ ကော်ပီကက် တကောင်ရှိတယ်။
“အမေမွေးကတည်းက ဂဏန်း” ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ သရုပ်ဖော်ပုံကို Paint ထဲမှာပဲ အလွယ်ဆွဲလိုက်မိတယ်။ အဲဒါကို နောက်တနေ့မှာ သမီးမြင်တော့ သူကလည်း Paint ထဲမှာပဲ လိုက်ဆွဲတယ်။ သူကလည်း သူ့စတိုင်လ်နဲ့ သူပေါ့။ ရယ်နေတဲ့ ပါးစပ်တောင် အပိုပါလာသေးတယ်။
သမီးငယ်ငယ်ကတည်းက ရယ်စရာတွေကို အရမ်းတွေးတတ် လုပ်တတ်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်လောက်ကဆိုရင် Animation လုပ်လို့ရတဲ့ Software လေးတခု ဝယ်လာပြီး ကျနော့် ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေမှာ ကျနော်လက်တည့်စမ်းတယ်။ အဲဒါကို သမီးမြင်တော့ သူကလည်း လိုက်ပြီး လက်တည့်စမ်းတော့တာပါပဲ။
ဟောဒါက သမီးလက်ရာတခု။ မိုးရေစက်ကျလို့ ဇီးကွက်လန့်သွားတာ ဆိုပဲ။ ကြံကြံဖန်ဖန်။
ဒါကတော့ Pull Game လို့ သူ့ဘာသာ နာမည်ပေးထားတဲ့ သမီးရဲ့ Animation လေးပေါ့။
လူတွေက လွန်ဆွဲသလို ကြိုးစရဲ့ တဖက်တချက်ကနေ ဆွဲနေကြတယ်။ ခဏနေတော့ တဖက်ကလူတွေက ကြိုးစကို ရုတ်တရက် လွှတ်လိုက်တဲ့အခါ ကျန်တဖက်က လူတွေ ဖင်ထိုင်လဲကျသွားတဲ့ပုံလေ။
အဲဒီလို ညစ်ကျယ်ကျယ် အတွေးတွေ သူဘယ်က ဘယ်လို ရလာသလဲမသိဘူး။ ဖအေလုပ်သူ ဒီလောက် တည်တည်တံ့တံ့နေတဲ့ ကြားက အတတ်ကောင်းတွေ တတ်လာတယ်။ ဧကန္တတော့ ငယ်ငယ်က တွန်မ် နဲ့ ဂျယ်ရီ တွေ အကြည့်များပြီး အတုမြင် အတတ်သင်လာတာပဲဖြစ်ရမယ်။
ဒါကတော့ ကျနော့်ပုံတဲ့။ ကြည့်ဦး....ဖိုင်နာမည်ပေးထားတာကိုက “အောင်ချီးတုံး”တဲ့.... ဟင်း။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, June 26, 2010
Labels: သမီး Comments: (16)
“ဒီနေ့… မင်း သမီး အင်္ကျီအသစ် ဝတ်ထားတယ်။ အဲဒါ ခလေးကို မလှဘူးလို့ မင်း သွားမပြောနဲ့နော်။ သူက အဲဒီအင်္ကျီနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ အရမ်းလှတယ်လို့ ယူဆနေတာ။ မင်းကို ပြချင်လွန်းလို့ အခု သူဝတ်ထားတာတဲ့”
ရုံးမှ အိမ်သို့ အပြန်လမ်းတွင် မဒမ်ပေါက ကျနော့်အား တတွတ်တွတ် မှာကြားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်က သမီးကို စတတ်နောက်တတ်လွန်း၍ စိတ်အပူလွန်ကာ ကြိုတင် ပြောနေရခြင်းဖြစ်သည်။ သမီးကလည်း သူ့အမေနဲ့ သူ့အဖွားရဲ့ အထင်အမြင်တွေကို အလေးမထား။ ကျနော့်ထံက ချီးကျူးသံ၊ အတည်ပြုသံကိုသာ အစဉ်သဖြင့် ကြားချင်သူဖြစ်သည်။
အိမ်ရောက်တော့ ကရင်သင်တိုင်းအင်္ကျီလိုလို အနီရောင်အင်္ကျီအသစ်ကလေးကို ဝတ်ဆင်ထားသော သမီးက တံခါးလာဖွင့်ပေးသည်။
“ဟာ…. အင်္ကျီအသစ်ကလေးနဲ့ ငါ့သမီး တယ်လှပါကလား”
ဤသည်ကား မဒမ်ပေါ မှာထားသည့်အတိုင်း အတည်ပေါက် ပြောလိုက်ခြင်း။ ပြီးတော့မှ ထုံးစံအတိုင်း မနောက်ရလျှင် မနေနိုင်သဖြင့် နောက်ဆက်တွဲ ထပ်ပြောလိုက်သည်။
“အခုလိုဆိုတော့ သမီးက ကရင်မလေး နော်လဲမူ နဲ့ တူသွားတယ်”
လဲမူ ဆိုသည်မှာ စကားလိမ်ဖြင့် လူမဲ ဟု အသံထွက်သည်။ သမီးကို လူမဲနှင့်တူသည်ဟု ဆိုလိုခြင်း။ သမီးကလည်း ကျနော့်အထာကို ညက်နေသူပီပီ ချက်ချင်းဆိုသလို….
“ဖေဖေကလည်း ဝုတ်ပက် နဲ့ တူတယ်”
ဝုတ်ပက် ဆိုသည်မှာ “ဝက်ပုပ်” ကို ပြောင်းပြန်လှန်ထားသည့် အသံထွက် ဖြစ်ပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလို သမီးနှင့် ကျနော်သည် ဗမာစကား စကားလိမ်များကို အပြန်အလှန် စတတ်၊ နောက်တတ်ပါသည်။
“သမီးက အသဲမား (=အသားမဲ)”
“ဖေဖေက ကီပလပ် (=ကပ္ပလီ)”
“သမီးက မဲသွေးခီး (=မီးသွေးခဲ)”
သမီးသည် စကားလိမ်များကို ကျနော့်လောက်တော့ မကျွမ်းကျင်သဖြင့် အတန်ငယ် စဉ်းစားပြီးမှ ပြောရသည်။ ယခုလည်း….
“ဖေဖေက ဖြုတ်……(ဤနေရာတွင် တိုးလို့တန်းလန်း ရပ်ဆိုင်းသွားပြီး ခဏကြာမှ)…..ဗ။ ဖြုတ်ဗ”
“ဖေဖေကလည်း နုံလိုက်တာ။ ဖြုတ်ဗ…ဖဗြုတ် (ဖားပြုတ်)ပေါ့”
ကျနော်တို့နှစ်ယောက် အရည်မရ အဖတ်မရ အချီအချပြောနေကြသည်ကို ဘေးက နားကြားပြင်းကပ်နေပုံရသော မဒမ်ပေါသည်ပင် ဤနေရာရောက်သောအခါ မနေနိုင်။ တခွိခွိ ရယ်မောလေတော့သည်။
မြန်မာစကားလိမ်များကို နေရာမျိုးစုံတွင် သုံးကြသည်။ နာမည်ကျော် ဦးပုညဆိုလျှင် တေးထပ်ထဲတွင်ပင် ထည့်စပ်လိုက်သေးသည်။
စာမလိပ်…..စိတ်မလာ။ အဝါဇိတ်….. အဝိဇ္ဇာ။ သြော်… တတ်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ ဦးပုညပါကလား။
တသက်တာတွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော နာမည်များအနက် စကားလိမ်ဖြင့် ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်လျှင် ရယ်စရာဖြစ်လာသော နာမည်(လိမ်)များကို သတိရမိပါသည်။
မလေးရှားတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြစဉ်က ကျနော်တို့အထဲတွင် ကိုဉာဏ်စိုး ဆိုသည့် အစ်ကိုကြီးတယောက်လည်း ပါသည်။ ။ တခါတလေ ကိုဉာဏ့်ကို စချင်နောက်ချင်သည့်အခါ “သခင်ဉာဏ်စိုး” ဟု ခေါ်ကြပါသည်။ အကောင်း ခေါ်ကြခြင်းကား မဟုတ်ပေ။ ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်လျှင် “သူခိုးဉာဏ်ဆင်” ဟု အသံထွက်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
“သက်ထွေး” ဟူသော အမည်မှာလည်း သိပ်မကောင်း။ ပညတ်သွားရာ ဓါတ်သက်ပါပြီး လူပုံအလယ်တွင် အရယ်လွန်မိပါက ဒုက္ခရောက်နိုင်သောကြောင့်ပင်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်ဆီက စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သောအခါ ပါမောက္ခချုပ် ဦးကြင်စိုး၏ ကိုင်တွယ်ပုံကို မကျေနပ်သော ကျောင်းသားအချို့က ကွယ်ရာတွင် ဆရာကြီးနာမည်အား (ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ) ပြောင်းပြန်လှန်ခေါ်ဆိုကြသည်ကိုလည်း ကြားခဲ့ဖူးပါသေးသည်။
စကားစပ်မိ၍ ပြောရလျှင် တလောဆီက မငယ်နိုင်၏ ဘလော့ဂ်တွင် “ပေတောကုန်းမှ ကိုပေါတေနှင့် အင်တာဗျူး”ဟု ပို့စ်တခု တင်သောအခါ မိမိကို စောင်းပြောလေသလားဟု အပြေးအလွှား သွားဖတ်ရသေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျနော်၏ ဇာတိ ချက်မြှုတ် ရွာအမည်မှာ ပေတောရွာ ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်တည်း။ နာမည်ကလည်း ကိုပေါတေ…တဲ့။ ဟွန်း… တူစရာ ရှားလို့။ ပေတောကို ပြောင်းပြန်လှန်ထားပုံရသည်။
ယခုလည်း မြန်မာဘလော့ဂ်လောကမှ ဘလော့ဂါအချို့၏ နာမည်များကို (အားနေသည့်အလျောက်) ပြောင်းပြန်လှန်ကြည့်ရာ ရယ်ချင်စရာ အသံများထွက်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
နှစ်ကျပ်ခွဲအားကိုးဖြင့် စားကောင်းသောက်ဖွယ်ရာ ဓါတ်ပုံများကို တင်ဆက်နေသော ဘလော့ဂါ “သက်ဝေ” ၏ အမည်ကိုတော့ ခင်မင်သောအားဖြင့် ပြောင်းပြန်မလှန်ဘဲ ချန်လှပ်ထားခဲ့ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ အလားတူပင် မှတ်သားဖွယ်ရာ ထိုထိုစာကို တင်ဆက်လေ့ရှိသည့် “ကိုဧရာ” အားလည်း လေးစားသောအားဖြင့် ပြောင်းပြန်မလှန်မိရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချလိုက်ပြန်ပါသည်။
“ချိုသင်း”ဟူသည့် ကဗျာဆန်သော နာမည်မှာမူ ပြောင်းပြန်အလှန် မတော်ပါက “ချဉ်သိုး” ဟု ဆန့်ကျင်ဖက် အနက်အဓိပ္ပါယ်ပင် ထွက်သွားတတ်ကြောင်း သတိပြုမိပါသည်။ စကားလိမ်အမှန်မှာ “ချင်းသို” ဖြစ်ပါသည်။
ခေဦးမင်…ကား….. ခေသော ဦးမင် မဟုတ်ချေပါတကား။
လစ်သူ… ဆိုသည်မှာ လစ်ပြေးသူ (သို့မဟုတ်) အလစ်သုတ်သူ (သို့မဟုတ်) အစိုးရဌာနတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖူးသူသာ ဖြစ်ရချေမည်။
ညဉ့်ငှက်တို့အကြောင်းကို ခရေစေ့တွင်းကျ မြူးမြူးကြွကြွ ရေးသားတင်ဆက်တတ်သူ စိန်ရတုမှတ်တမ်းပိုင်ရှင်ကြီးအား “ကောက်ကြီးကျိုး”ဟု စကားလိမ်ဖြင့် ပြောင်းပြန်လှန် ခေါ်ဆိုရလျှင် လိုက်ဖက်မည်လော မသိ။
ဤသို့လျှင် (အားနေသည့်အလျောက်) ရောက်တတ်ရာရာ ရေးလိုက်ရပါသည်။
Posted by ကိုပေါ on Friday, June 25, 2010
Labels: general Comments: (10)
ကျုပ်သွားတတ်သလို သွားနေတာ မြင်ရင်ပဲ
ခင်ဗျားကို ကန့်လန့်တိုက်တယ်လို့ ထင်တတ်တယ်။
ကျုပ်ဟာ အမေမွေးကတည်းက ဂဏန်း
ကဲ့ရဲ့သဂြုင်္ိဟ် စကားတင်း ဆိုတတ်တယ်။
ဒီကောင် အမြှုတ်တစီစီထွက်အောင် ပြောပလေ့စေတဲ့။
Posted by ကိုပေါ on Thursday, June 24, 2010
Labels: Poem Comments: (23)
သနပ်ခါးအဖွဲ့မှ စီစဉ်တည်းဖြတ်သော “မြန်မာနိုင်ငံ-ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အမျိုးသမီးများ၏ အသံများ” စာအုပ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၅ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြီးခဲ့တဲ့ သတင်းပတ်အတွင်းက ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ မဒမ်ပေါရဲ့ ကဗျာတပုဒ်ကို ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ မဒမ်ပေါကိုယ်တိုင် ရေးခြစ်ထားတဲ့ ပုံကလေးနဲ့အတူ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
A Place Called “Burma”
Prison without iron bars…
People always live in fear…
Midnight knocks you’ll get used to hear…
Heavy hearts are weeping with silent tears…and
Hope is the only thing people have for years…
That’saplace we call “Burma”
တင်စားရမယ့်နေရာ … …။
အမြဲ အကြောက်တရားနဲ့ပဲ နေထိုင်ကြရတဲ့ နေရာ … …။
နေသားကျလို့ ယဉ်ပါးကြရတဲ့ နေရာ … …။
အသံတိတ် ကျိတ်လို့ ငိုကြွေးကြရတဲ့ နေရာ … …။
“မျှော်လင့်ချက်”ကလွဲလို့ ဘာဆိုဘာမှ မရှိဘဲ
ကာလရှည်ကြာ နေခဲ့ကြရတဲ့ နေရာ … …။
ငါတို့ “မြန်မာပြည်”လို့ ခေါ်နေကြတဲ့ နေရာတခုသာ … …။
ပူးတွဲဖတ်ရှုရန်။...............။ Burmese women speak up for peace to mark Suu Kyi's 65th birthday (The Nation)
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, June 23, 2010
Labels: MDP Comments: (15)
ဇွန်လ ၁၉ ရက်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၅ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက် ဘာပို့စ်တင်ရမလဲ စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ Walt Disney က ထုတ်လုပ်တဲ့ Fantasia 2000 ထဲက Beethoven's Symphony No.5 တေးသွားနဲ့ သရုပ်ဖော် Animation လေးကို ထူးထူးခြားခြား သွားသတိရမိတယ်။ ဒါနဲ့ ယူကျု မှာ ရှာဖွေပြီး မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် တင်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလင့်ခ်မှာ သွားကြည့်လို့လည်း ရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက် မွေးနေ့မှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာချမ်းသာစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ မြန်မာပြည်မှာ သားငယ်နှစ်ဦးနဲ့တကွ မြေးငယ်လေးတွေနဲ့ပါ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဆုံးဆည်းနိုင်ပါစေကြောင်း ထပ်ဆင့်ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကြီးမြတ်မှု၊ ဖြူစင်မှု၊ သတ္တိပြောင်မြောက်မှု၊ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာကြီးမှုတို့ကို အစဉ် လေးစားဦးညွှတ်လျက်....
(၁၉ ရက်၊ ဇွန်လ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်)
Posted by ကိုပေါ on Saturday, June 19, 2010
Labels: Birthday wish Comments: (10)
ဘာကြောင့်ချစ်တာလဲ ဆိုရင်တော့ တိတိကျကျ မဖြေတတ်ဘူး။ “ချစ်လို့ ချစ်တာ” လို့ဘဲပြောရမယ်ထင်တယ်။ ငယ်ငယ်လေးထဲက ပုံဆွဲရင် ငှက်ပုံလေးတွေ အမြဲဆွဲနေမိတယ်။
ငှက်ကလေးတွေ သစ်ကိုင်းပေါ်မှာ နားနေတာ.. ဒါမှမဟုတ်…လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျံနေတာကို ငေးကြည့်ရတာ နှစ်သက်တယ်။ သူတို့လေးတွေကို ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်ရတာမျိုးဆို တခါမှ ပင်ပန်းတယ်လို့ မခံစားရဘူး။ စင်ကာပူက Bird Park ရောက်တိုင်း ငှက်ပုံလေးတွေ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ လိုက်ရိုက်ရတာ ပျော်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က ညနေစောင်းတွေမှာ အမှိုက်သွားပစ်တိုင်း အံဖုံးရှိတဲ့နေရာ နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက ဝရန်တာလက်ရန်းမှာ ခိုတကောင် နားနေတတ်တာကို သတိထားမိတယ်။
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး၊ ငှက်မြင်ရင် မကြည့်ဘဲမနေနိုင်တာကြောင့်ပါ။ အဲဒီနေရာလေးကလည်း အမှိုက်ပစ်တဲ့နေရာဆိုပေမယ့် အိမ်နီးချင်း တရုတ်ကြီးရဲ့ကောင်းမှုကြောင့် သစ်ပင်ပန်းပင်လေးတွေ စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ ပန်းခြံအငယ်စားလေးလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီခိုဟာ နေရာလေးကို သဘောကျလို့ အိပ်တန်းလာတက်တယ်လို့ဘဲထင်လိုက်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် တရက် အမှိုက်သွားပစ်ရင်းနဲ့ ဝရန်တာလက်ရမ်းမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ပန်းအိုးထဲက ခိုဥလေး နှစ်လုံးကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ ဒီခိုလာပြီး ရစ်သီရစ်သီလုပ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သဘောပေါက်သွားပါတော့တယ်။
ငှက်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အသိုက်တွေကို လူတွေ အလွယ်တကူနဲ့ လက်လှမ်းမမှီတဲ့နေရာတွေမှာ ဆောက်တတ်ကြတယ်။ စင်ကာပူမှာဆိုရင်တော့ MRT ရထားလမ်းနဲ့ ရထားလမ်းဒေါက်တိုင်တွေကြားက ကပ်သီးကပ်သပ် နေရာလေးတွေမှာ များသောအားဖြင့် တွေ့ရတတ်တယ်။
ဒီ ခိုမ ကျမှ ပန်းအိုးထဲမှာ ကြံကြံဖန်ဖန် အသိုက်လာလုပ်လေတယ်။ အိမ်တိုင်းက တနေ့ အနည်းဆုံး တခေါက်၊ နှစ်ခေါက် အမှိုက်သွားပစ်ကြတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ ဒီခိုနှယ်.. လူမကြောက်တတ်လိုက်တာ....လို့ တွေးမိတယ်။ အင်းလေ……ဒီမှာကလည်း ငှက်တွေ့ရင် “ ဒါ...ကြော်စားလို့ရတယ်” လို့ တွေးမယ့်လူ ရှားပေတာကိုး။ စင်ကာပူမှာ ငှက်တွေအားလုံး လွတ်လပ်ခွင့်ရှိကြပါတယ်။ ကျီးကန်းတွေကတော့ ချွင်းချက်ပေါ့။ သူတို့ကို သက်ဆိုင်ရာက လေသေနတ်နဲ့ မကြာမကြာ လိုက်ပစ်တာကြုံဖူးတယ်။
အသိုက်ကို လူသူကင်းဝေးပြီး လုံခြုံတဲ့နေရာမှာ လုပ်ရမယ့်အစား ပန်းအိုးကို အသိုက်လာလုပ်တာကိုက လွန်လှပြီ။ ဒီကြားထဲ အသိုက်အတွက် သစ်ကိုင်းခြောက်ကလေးတစ၊ တံမြက်စည်းစလေးတမျှင်တောင် ချီသယ်မလာဘဲ… ပန်းအိုးထဲက မြေကြီးပေါ်မှာ ဥနှစ်လုံးကို ဒီအတိုင်းကြီး ဥ ချ သွားတာ တွေ့ရတော့ ဒီခိုမ ပျင်းပုံကို သြချမိပါတယ်။
တိုက်တထပ်တည်းမှာ နေကြသူတွေအားလုံးလိုလိုကတော့ ဒီခိုမနဲ့ ခိုဥနှစ်လုံးကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားကြတာ တွေ့ရတယ်။ နဂိုက ဓါတ်လှေကားထဲ ဆုံကြရင်တောင် ပြုံးပြဖော်မရဘဲ ဘာသိဘာသာနေတတ်သူတွေဟာ ဒီခိုတွေကို အကြောင်းပြုလို့ နှုတ်ဆက်ပြီး စကားစမြည် ပြောစရာ အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်။
ပန်းအိုးပိုင်ရှင် တရုတ်ကြီးကတော့ မျက်နှာအပွင့်ဆုံးပေါ့။ သူ့ပန်းအိုးကို ရွေးပြီး ခိုမက ဥသွားတာကို သူက ဂုဏ်ယူဝမ်းသာနေပုံရတယ်။ သွားရင်းလာရင်း လှမ်းကြည့်လိုက်ရင် သူ့ကို ပန်းအိုးနားမှာ အခြားတယောက်ယောက်နဲ့ ဟောင်ဖွာ ဟောင်ဖွာ စကားပြောနေတာ တွေ့ရတတ်တယ်။ မျက်နှာကလည်း သကာရည်လိမ်းထားတဲ့ မျက်နှာကြီးနဲ့ပေါ့။ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်က လူဆိုလည်း မနက်တိုင်း ရုံးမသွားခင် ဓါတ်လှေကားစောင့်ရင်း ခိုဥကို အရင် အပြေးအလွှား သွားကြည့်ရတာ အမော။ ကျမ ညနေရုံးက ပြန်လာလို့ ခိုဥ သွားကြည့်ဖြစ်တဲ့နေ့တွေဆို ပန်းအိုးနားမှာ ပိုင်ရှင် အဖိုးကြီးနဲ့လည်း စကားပြောဖြစ်တယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ… “ဥက ပေါက်ကာနီးပြီး ထင်တယ်” အစချီပြီး ဘာညာသာရကာ ပြောကြတာပေါ့လေ…။
ဥ ကမြေကြီးပေါ်မှာဆိုတော့ အကောင်လေးတွေပေါက်လာရင် အေးနေလိမ့်မလား တွေးမိတာနဲ့ မနေသာလို့ ရုံးနားက သစ်ကိုင်းခြောက်သေးသေးတွေ၊ သစ်ရွက်ခြောက်တွေ ကောက်လာပြီး အသိုက်ကို ကူဆောက်ပေးလိုက်သေးတယ်။ နောက်တနေ့ အိမ်က အထွက် မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ကလူရဲ့ အမေ နဲ့ ပက်ပင်းတိုးလို့ ပြုံးပြနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ အဖွားကြီးကလည်း ပြန်နှုတ်ဆက်ရင်း စကားစလာပါတယ်။ သူ့သားက သူ့ကို “အမေရေ…ခိုမတော့ အသိုက်လုပ်ဖို့ သစ်ရွက်တွေ သယ်လာပြီ”…လို့ လာပြောသတဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူက “ဒီခိုမ သယ်လာတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ပန်းအိုးအဖိုးကြီး ဒါမှမဟုတ် အိမ်ရှေ့အိမ်က တယောက်ယောက် လုပ်ပေးတာနေမှာပေါ့”..လို့ ပြန်ပြောလိုက်ရသေးတယ်ဆိုပဲ။ ဒီခိုမပျင်းပုံအကြောင်း တထပ်လုံး သတိထားမိနေတာကို သိလိုက်ရတဲ့အတွက် ပြုံးမိသေးတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ပျင်းတယ်ဆိုပေမယ့် ဥတွေကိုတော့ ခိုဖိုတလှည့် ခိုမတလှည့် တစိုက်မတ်မတ် ဝပ်ဖော်ရလို့ တော်သေးတယ်ပြောရမယ်။
ဒီလိုနဲ့ ခိုကလေးနှစ်ကောင် ပေါက်လာပါတယ်။ ဥက ပေါက်ကာစ အသည်းယားစရာ အရုပ်ဆိုးဆိုး ငှက်ပေါက်စလေးတွေပေါ့။
ပေါက်ပြီး မကြာလိုက်ပါဘူး။ တရက်နှစ်ရက်လောက်လည်း နေရော.. ခိုထီးရောခိုမပါ ပျောက်သွားလိုက်ကြတာ၊ တော်တော်နဲ့ ပြန်ပေါ်မလာတော့ပါဘူး။
အဲဒီမှာတင် ဟိုပန်းအိုးအဖိုးကြီးခမြာ အလုပ်တွေ ပိုတော့တာပေါ့။ လေတိုက်တဲ့ဒဏ်က ကာကွယ်ဖို့ရယ်၊ ခိုလေးတွေ အောက်ပြုတ်မကျအောင်ရယ် စက္ကူကတ္ထူပြားတွေ သုံးပြီး အသိုက်ကို ပြုပြင်ပေးရ၊ ခိုလေးတွေကို စောင့်ရှောက်ရနဲ့။ အမှိုက်သွားပစ်ရင်းနဲ့ဆုံရင်လည်း သူ့ပါးစပ်က “ဒီ ခိုမ၊ ကလေးတွေကို ပစ်ထားပြီး ဘယ်သွားနေပါလိမ့်” ဆိုတာမျိုး တဖျစ်တောက်တောက်နဲ့ ပြောနေတတ်သေးတယ်။
နောက်ထပ် နှစ်ရက်လောက်နေတော့ ခိုလေးတကောင် သေသွားတယ်။ အမေရဲ့ ကိုယ်ငွေ့မရတာလဲ ပါမှာပေါ့လေ။
အဖိုးကြီးလည်း ကျန်တဲ့တကောင်ကို တအားဂရုစိုက်တော့တာ။ ရေခွက် နဲ့ ပေါင်မုန့်စလေး တွေကိုလည်း အသိုက်နားမှာ အဆင့်သင့် ထားပေးတယ်။ ခိုကလေးကတော့ သိပ်စားတာကို မတွေ့ရဘူး။ တချိန်လုံး အိပ်ချည်းနေတာပဲ။
အသက်ပြင်းတယ်ပဲ ပြောရမလား။ ကျန်တဲ့တကောင်ကတော့ တနေ့တခြား အကောင်ထွားလာတယ်။ သီတင်းနှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ခိုလေးမှာ အမွှေးအတောင်လေးတွေ တော်တော်စုံလာပြီး ပေါက်ကာစကလောက် အကြည့်ရမဆိုးတော့ဘူး။
တနေ့ ရုံးက ပြန်လာတော့ သမီးက ဆီးပြောတယ်။ “မေမေရေ ဒီနေ့ ခိုမ သူ့ကလေးကို ပြန်လာကြည့်တယ်” တဲ့။ သြော်....ကောင်းပါလေ့။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း ခိုမက ထင်သလောက်တော့ မဆိုးသေးဘူးပေါ့။ အစက ခိုကလေးကို ဘယ်သူအပျံသင်ပေးမလဲလို့ စိုးရိမ်နေခဲ့တာ။ သူ့မှာ မိခင်မေတ္တာတော့ ကျန်သေးပုံရတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ရုံးပိတ်ရက်၊ မနက်စောစော ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်နေတုန်း ပြူတင်းပေါက်နားမှာ ငှက်တောင်ပံ ခတ်သံတွေ တဖျတ်ဖျတ် ကြားနေလို့ အပြင်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူ့ကို အပျံစသင်တဲ့နေ့ဖြစ်နေပါရောလား။ ခိုအဖေနဲ့ ခိုအမေမှာ သူ့ကို ပျံဖို့ နားချရင်း တော်တော် အလုပ်ရှုပ်နေပုံရတယ်။ သူကတော့ လက်ရန်းပေါ်မှာ နားနေတာ၊ တုပ်တုပ်မှ မလှုပ်ဘူး။
ဒီခိုကလေး စပျံတဲ့ အချိန်လေးကို အမိအရ မှတ်တမ်းတင်ချင်လို့ ကင်မရာကို အမြန်ပြေးယူလိုက်တယ်။
အပျံသင်တာကို ချောင်းရိုက်တဲ့နေရာကတော့ ဒစ္စကာဗာရီတို့ ဘီဘီစီတို့ထဲကလို တောထဲ တောင်ထဲမှာ မဟုတ်ဘဲ ရေချိုးခန်းပြူတင်းပေါက် သေးသေးလေးက တဆင့်ပါ။ လူတရပ်ထက် မြင့်တဲ့ ပြူတင်းပေါက်မို့ ခွေးခြေခုံအပုလေးပေါ်မှာ မတ်တတ်ရပ်၊ တရုတ်ကပ် မှန်ပြားပေါ် ကင်မရာကို မေးတင်ပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေး စောင့်ခဲ့ရတယ်။
တနာရီ နီးပါးလောက် ကြာလာတဲ့အထိ ဒင်းကလေးက မပျံသေးတော့ လူကလည်း ညောင်း၊ ကင်မရာပေါက်ထဲ ချောင်းရလွန်းလို့ မျက်စိတွေကလည်းပြာ၊ ချွေးတွေကလည်း တပြိုက်ပြိုက်နဲ့ပေါ့။
ခိုနှစ်ကောင် ခမြာလည်း သူတို့ ကလေးရှေ့က ဟန်ရေးပြပြီး ပျံပြနေရတာ အကြိမ်ပေါင်း မနည်းတော့ဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ သူ စ ပျံပါတော့တယ်။
ခဏနေတော့ ရုတ်တရက် ရေချိုးခန်းပြူတင်းပေါက်နဲ့ အနီးဆုံး လက်ရန်းဘောင်ပေါ်မှာ လာနားပါတယ်။
သူ့အဖေနဲ့အမေကတော့ အသိုက်နေရာကနေ သူ့ကို ပြန်စောင့်နေကြပါပြီ။
နောက်ဆုံးမှာ သူလည်း သူ့အသိုက်ဆီကို ပျံသွားပါတော့တယ်။
နောက်တရက် နှစ်ရက်လောက်နေရင် ပန်းအိုးအသိုက်ကိုစွန့်ပြီး သူဟာ အရွယ်ရောက်တဲ့ ခိုကလေးတကောင်အဖြစ် အဝေးကို ပြန်ထွက်သွားတော့မှာပါ။ သွားရင်းလာရင်း တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်မှာ၊ MRT လမ်း လက်ရန်းဘောင်တွေပေါ်မှာ ခိုကလေးတွေကို မြင်မိရင် ပန်းအိုးထဲက ခိုကလေးများလားလို့ သတိတရ တွေးဖြစ်နေဦးမယ် ထင်ပါရဲ့။
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, June 15, 2010
Labels: MDP Comments: (28)
ဧည့်ခန်းမတွေ၊ ဥယျာဉ်တွေထဲမှာ ပသာဒအတွက် တကူးတက ပြုပြင်မွေးမြူထားတဲ့ သစ်ပင်ကလေးတွေပေါ့။
သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် ဘွန်ဆိုင်းပင်ရဲ့အစဟာ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့် တရုတ်ပြည်မှာ ဟန်မင်းဆက် လက်ထက်ကတည်းက စခဲ့တယ် လို့ ယူဆကြပါသတဲ့။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားနဲ့ ဗီယက်နမ်တို့မှာ ဘွန်ဆိုင်းပင်ကို အသွင် အမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့လာကြရတယ်။
အချို့သော လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်း၊ အချို့သော နေရာဒေသမှာ ရှင်သန်ကြီးပြင်းရတာဟာလည်း လူဖြစ်ပေမယ့် ဘွန်ဆိုင်းပင်နဲ့ မခြားပါကလားလို့ တွေးမိတယ်။
လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ဖွံ့ထွားခွင့်မရအောင် မိမိကြီးပြင်းရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက နှစ်ရှည်လများဆိုသလို ပြုပြင်ပုသွင်းတာကို လှလှကြီး ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်.... ကိုယ်တိုင် ဘွန်ဆိုင်းပင်ကလေးလို ပုညှက်ကြုံလှီသွားသလားလို့တောင် ခံစားမိပါရဲ့။
တချို့ကတော့ လူလိမ္မာလေးတွေ၊ လူယဉ်ကျေးလေးတွေ။
တချို့ကတော့ ရိုးရာအစွဲအလမ်းကြီးသူလေးတွေ၊ လူကြောက်ကလေးတွေ။
တချို့ကတော့ လူရိုးလူအ ကလေးတွေ.....။
တချို့ကတော့ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုသာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မှတ်နေသူတွေ။
တချို့ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက သင်ပေးလိုက်တဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေဟာ ထာဝရ မှန်ကန် ကောင်းမွန်နေမယ်လို့ တရားသေ မှတ်ယူနေကြသူတွေ။
တချို့ကျတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ စံချိန်စံညွှန်းတွေ၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေ၊ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ ကြားမှာ ကိုယ့်ဘာသာ ပိတ်မိပြီး မွန်းကြပ်နေတဲ့ ရှားရှားပါးပါး လူ့ဘွန်ဆိုင်းလေးတွေ....။
ဒါပေမယ့် သစ်ပင်တွေမှာ ဘွန်ဆိုင်းပင်ကို အလှအပ ပသာဒအဖြစ် ရှုမြင်တတ်သူတွေရှိသလို လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း ကြုံလှီနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း (Retarded Society)ကိုမှ ပသာဒ ဖြစ်နေသူတွေလည်း ရှိလေရဲ့။
ဧည့်ခန်းထဲက ဘွန်ဆိုင်းပင်ကလေးသာ စကားပြောတတ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်....
“ဥယျာဉ်မှူးကြီးခင်ဗျား၊ ကျနော့်ကို သဘာဝအတိုင်းသာ လွတ် လွတ်လပ်လပ် ရှင်သန်ကြီးထွားခွင့်ပေးပါ။ ကျနော်ဟာ တောင်ကုန်းထက်မှာ အရိုးပြိုင်းပြိုင်း အထီးကျန်ကျန် အရုပ် ဆိုးဆိုး ပသာဒမရှိတဲ့ သစ်ပင်ကြီးဘ၀နဲ့ နိဂုံးချုပ်ရလည်း ချုပ်ရပါစေတော့။ ဒါပေမယ့် သီးချိန်တန်သီး၊ ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်။ အကိုင်း အခက် အလက်တွေ ဝေေ၀စည်စည်နဲ့ လေပြည်ထဲမှာ၊ မုန် တိုင်းထဲမှာ၊ မိုးသည်းထဲမှာ၊ နေပူကျဲထဲမှာ လောကဓံကို ကြံ့ ကြံ့ခံရင်း သူလိုငါလို သာမန် သစ်ပင်တပင်ဘ၀နဲ့ဘဲ ရှင်သန် ပါရစေခင်ဗျား” .....လို့များ ပြောရှာလေမလားမသိ။
တကယ့်တကယ်မှာတော့ သစ်ပင်တွေက စကားမပြောတတ်ရှာလို့ ဒီလို ဖွင့်မပြောကြပါဘူး။ လူတွေမှာတော့ စကားပြောတတ်ပေမယ့် လူ့ဘွန်ဆိုင်းပင်ဘ၀မှာပဲ ပျော်မွေ့နေကြသူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေး ပါ။
(၂၀၀၈ ခု ဧပြီလတုန်းက ရေးတင်ခဲ့တဲ့ “ဘွန်ဆိုင်း”ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို နည်းနည်းပြုပြင်ပြီး ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။)
Posted by ကိုပေါ on Sunday, June 13, 2010
Labels: republished Comments: (37)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မှတ်သားဖွယ် စကား
ရှေ့ပို့စ်ထဲက ကွန်မင့်ကဏ္ဍမှာ အမည်မသိတယောက်က လာရောက် ညွှန်းဆိုသွားလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စကားလေးကို ရှာဖွေကြည့်ရှုမိပါတယ်။ လက်တလော ကျနော်တို့တွေ ရေးသားနေကြတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှကျပြီး ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း နှစ်ခြိုက်မိတဲ့အလျောက် ပို့စ်အတိုလေး အဖြစ် သီးသန့်တင်လိုက်ပါတယ်။
"It is notasacrifice, it'sachoice. If you choose to do something, then you shouldn't say it'sasacrifice, because nobody forced you to do it"
- Aung San Suu Kyi-
“ဒါဟာ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ သင်ဟာ တစုံတခုကို ပြုလုပ်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ဒါကို အနစ်နာခံတာပါလို့ သင့်အနေနဲ့ မပြောသင့်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘယ်သူကမှ သင့်ကို ဒါလုပ်ရမယ်လို့ အတင်းဖိအားမပေးခဲ့တဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။”
ဒီ စကားကို ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ မှတ်သားဖွယ်ရာ စကားကောက်နှုတ်ချက်တွေမှာ ဖော်ပြထားခြင်း ခံရတာကို တွေ့ရပါတယ်။
(၁) “နှစ်သက်မိသော သူ့အမြင်”
(၂) ကျေးဇူးရှင် မှိုလိုပေါတဲ့ လောကကြီးအလယ်မှာ
Posted by ကိုပေါ on Friday, June 11, 2010
Labels: sharing Comments: (82)
ကျေးဇူးတရားအကြောင်း နောက်ထပ် ကိုယ်တိုင်ရေး ပို့စ်တပုဒ်မရေးခင်စပ်ကြား ရီတာကို ဘလော့ဂ်က သူမရဲ့ ကွန်မင့်တွေကို ပို့စ်အနေနဲ့ တင်ချင်ပါတယ်။
ဂါရဝေါစ.... ရိုသေထိုက်သောသူကို ရိုသေခြင်းဆိုတာမှာ အသက်ကြီးသူတွေကိုချည်း ရိုသေရမယ်လို့ ကျနော် မယူဆချင်ပါဘူး။ ကျနော့်တသက်တာမှာ တွေ့ကြုံဖူးသလောက် လူကြီးဖြစ်နေပြီး သုံးစားမရတဲ့လူတွေ တပုံကြီးရှိသလို ငယ်ရွယ်သူတွေဖြစ်ပေမယ့်လည်း လေးစားအပ်တဲ့လူတွေ ရှိနေတာ မကြာခဏ ကြုံဖူးပါတယ်။
ညီလင်းဆက်နဲ့ ရီတာကို တို့ရဲ့ အမြင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အကြိမ်တိုင်းမှာ ကျနော်နဲ့ အမြင်တူတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့်လည်း တချို့သော ကိစ္စတွေမှာ သူတို့ရဲ့ အမြင်တွေကို နှစ်သက်လေးစားမိပါတယ်။
အခု “ကျေးဇူးတရား”နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရီတာရဲ့ ပို့စ် ကွန်မင့်ကဏ္ဍမှာ ကိုအင်ဒီမြင့်ရဲ့ ကွန်မင့်အပေါ် ရီတာ ပြန်ဖြေထားပုံက မှတ်သားစရာလည်းကောင်း၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့လည်း အင်မတန် နှစ်သက်မိတဲ့အလျောက် ရီတာ့ဆီမှာ ခွင့်တောင်းပြီး (ခွင့်ပြုချက်မရခင်မှာဘဲ) ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ ပို့စ်တခုအနေနဲ့ သပ်သပ် တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်နှစ်ခြိုက်လက်ခံသော်လည်း စာဖတ်သူ မနှစ်ခြိုက်လိုက မနှစ်ခြိုက်ဘဲ နေနိုင်ခွင့် အပြည့်ရှိပါတယ်။
ကိုအင်ဒီရဲ့ ကွန်မင့်ကနေစလို့ ရီတာဖြေထားတဲ့ကွန်မင့်တွေကို အဆုံးထိ တောက်လျှောက် ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
စာတစ်ပုဒ်တည်းက အကြောင်းအရောတွေ အများကြီးထဲက ကျေးဇူးတင်တာနဲ့ ပက်သတ်ပြီး နည်းနည်း ၀င်ရှည်လိုက်ဦးမည်။ ဒီနေရာမှာ ဘိုတွေနဲ့ “ဗမာ”တွေ ကွာသွားတာက ဘိုတွေက သေးသေးကြီးကြီး လုပ်ပေး Thank You လိုက်တာပဲ။ ပြောပြီးလည်း ခဏပဲ ခံတယ်။ နောက်နေ့မှာ မင်းကိုငါ မနေ့က ကူညီထားတာလေ သွားပြောရင်တောင် မမှတ်မိဘဲ ဘာတွေ လာကြောင်နေတာလဲ ပြောထည့်လိုက်ဦးမည်။
တို့ဗမာများကတော့ ပါးစပ်က မသွက်ပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ တစ်သက်လုံး စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်နေရော။ ညီလင်းဆက်ပေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေ ကျောင်းဆရာတွေ ဥပမာက ကောင်းတယ်။ ဆရာဝန်၊ ကျောင်းဆရာ အတန်းအစားထဲကဆို ကိုယ့်ကို ကုသပေး၊ သင်ကြားပေးတဲ့သူ မဟုတ်တာတောင် အဲဒီ အတန်းအစားဆို လေးစားပြီး ကျေးဇူးတွေ တင်နေလိုက်ကြတာထဲမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် ပါချင်တယ်။
စာဖတ်နာတဲ့သူကတော့ အတွေးအခေါ် (မှန်ချင်လည်း မှန်မည်။ မှားချင်လည်း မှားမယ်) တမူထူးပေမယ့် လောကမှာ လူသာမန်တွေက အများသားလား။ တကယ်ပြောချင်တာက “ကိုယ် လုပ်စရာရှိ လုပ်လိုက် လူတွေ ကျေးဇူးတင်အောင် အထင်ကြီးအောင် မလုပ်နဲ့”လို့ ပြောချင်တာကို “(ဥပမာ) လုပ်အားပေးတဲ့သူတွေ ဘလော့ရေးတဲ့သူတွေက အားယားနေလို့ လုပ်တာ စိတ်အပန်းဖြေလုပ်နေကြတာ နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူတွေက သူ့ခံယူချက်နဲ့မို့ သူလုပ်နေတာ ကျေးဇူးတင်စရာ မလိုဘူး” လို့ ယူသွားမည့်လူတွေ ရှိနိုင်တာ ကိုယ်တွေ့ပဲလေ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ကလေးအဖေမို့လားမသိ့ လူသာမန်တွေကို (ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း လူသာမန်ပါပဲ) ပြောတဲ့ အခါ ကလေးတွေကို ပြောပြသလို ရှင်းရှင်းရိုးရိုးနဲ့ တည့်မတ်မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပဲ လျှောက်စေချင်တယ်။ ခပ်မြင့်မြင့် အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ လူသာမန်တွေကို ရှုပ်ထွေးလမ်းမှားစေတာနဲ့ စာရင် ဒီလိုပဲ ကောင်းတယ်လို့ Personally ထင်တယ်လေ။ ဒီ ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစား အကြောင်းအရာ တစ်ခုထဲမှ မဟုတ်ပါဘူး တခြားဟာတွေကိုလည်း ဒီလိုပဲ ပြောလေ့ရှိတာတွေ့မိမှာပါ။
ဒါနဲ့ စာမပေါက်တဲ့ ဗမာတွေထဲမှာ ကျွန်တော်လည်း ပါမယ်။ ရီတာက ကျေးဇူးတင်သင့်တယ် ဆိုတာလား မဆိုတာလားကို အသေအချာ မရသေးဘူး။ (ဒါကိုကလည်း စာရေးနည်း တစ်ခုပဲကိုး…)
June 8, 2010 10:17 AM
တကယ်တော့ ဒီ post အတွက် comment တွေ လာရင် ဘာမှ မပြန်ဘဲနေမယ်လို့ စဉ်းစားထားခဲ့တာပါ။ ခါတိုင်းပြန်နေကျ comment မျိုး (ဇွန် မေးထားတာမျိုး) ကိုတောင် မပြန်ဘဲ နေလိုက်တယ်။ နောက် မွန် ဆိုတဲ့ တစ်ယောက် ပို့တဲ့ comment ကိုလည်း သူ့ကို သေချာပြောပြပြီး မတင်ဘဲ ထားလိုက်တယ်။ မွန်က အကောင်းတွေ ရေးထားလို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ ကိုအင်ဒီ comment ကိုတော့ ပြန်ချင်စိတ်ပေါက်မိလို့ရော၊ ပြန်သင့်တဲ့ comment ဖြစ်လို့ရော ပြန်ပါမယ်။
(တကယ်ပြောချင်တာက “ကိုယ် လုပ်စရာရှိ လုပ်လိုက် လူတွေ ကျေးဇူးတင်အောင် အထင်ကြီးအောင် မလုပ်နဲ့”လို့ ပြောချင်တာ)
အဲလို ပြောချင်တာလည်း မဟုတ်ဘူး ကိုအင်ဒီ။ ပြောလည်း ဘာမှ ထူးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ ဆိုလိုရင်းက "လုပ်စရာရှိတာ လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ချင်တာကို လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစား ကျေးဇူးတရား ဆိုတာတွေ၊ အနစ်နာခံတယ်ဆိုတာတွေ မဆိုင်တာတွေ ထည့်ပြောနေရင် ပြောနေတဲ့ သူတွေဟာ စိတ်ကုန်စရာကြီး၊ ကျွန်မကတော့ အဲလိုလူမျိုးကို ရိုးသားတယ် မထင်တော့ဘူး။ မယုံကြည်ဘူး" လို့ ဆိုလိုချင်တာပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်အောင် အထင်ကြီးအောင် လုပ်ချင်လုပ်၊ မလုပ်ချင် မလုပ်နဲ့။ သူ့သဘောအတိုင်းပါ။ အထင်ကြီးတာ မကြီးတာ၊ ယုံကြည်တာ မကြည်တာလဲ ကိုယ့်သဘောပဲပေါ့။ ဒါ ရှင်းပါတယ်။
ညီလင်းဆက် ဆီမှာ အဲဒီ စကားလုံးက ဘယ်ကနေ အရင်းခံလာသလဲ ကျွန်မ ထင်တာ ပြောကြည့်မယ်။ မီဒီယာနဲ့ အနုပညာသမား အပြန်အလှန် ကျေးဇူးရှိကြတယ် ဘာညာ ဘာညာကနေ စလာတယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာဆိုင်လဲ။ မီဒီယာဘက်က မအောင်မြင်ခင်ပဲ တင်ပေးပေး၊ အောင်မြင်မှ တင်ပေးပေး မဂ္ဂဇင်း ဂျာနယ် ရောင်းရဖို့၊ သတင်းရဖို့ သူ့အလုပ် သူလုပ်တာပဲ။ ဒီလိုပဲ အနုပညာသမား ဆိုတာတွေဘက်ကလည်း ပေါင်းကူးတံတားခေါ်ခေါ်၊ အငှားပါးစပ်နဲ့ ပရိသတ်ကို စကားဆိုတယ်ပြောပြော သူ့အလုပ်သူ လုပ်တာပဲ။ အပြန်အလှန် အကျိုးပြုနိုင်တယ်ဆိုရင် အပြန်အလှန် အလေးထားကြပေါ့။ ဒါပါပဲ။ ပြီးတော့ ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စက နှစ်ယောက်တည်းရဲ့ အရေးကိစ္စပဲ။ ဘယ်သူက ဘယ်ဘက်ကမို့လို့ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေက ဘယ်လိုရပ်တည်တယ် ဆိုတာတွေ ဖတ်ရ သိရတာ အတော် လေ စရာပါပဲ။ ထားပါတော့။
June 8, 2010 11:46 AM
(ရီတာက ကျေးဇူးတင်သင့်တယ် ဆိုတာလား မဆိုတာလားကို အသေအချာ မရသေးဘူး)
ကျွန်မအနေနဲ့ တင်သင့်၊ မတင်သင့် ဆိုတဲ့ဘက်က ဘယ်တော့မှ ဆွေးနွေးမှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါက ခံယူတဲ့သူနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စမို့လို့ပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်မ ခံယူတာကို post ထဲမှာ ထည့်ပြောပြီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ တိကျအောင် ထပ်ဖြည့်ချင်သေးတယ်။ ထပ်ပြောရင်တော့ အဲဒါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် 'တင်' တာနဲ့ တူသွားမှာကိုလည်း သေချာပေါက် သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တမင်ကို ထပ်ဖြည့်ပြောပါမယ်။ မနေ့က နေ့လည် ရုံးအောက်က fab လုပ်တဲ့နေရာကို ဆင်းတော့ ကျွန်မလျှောက်လာမယ့်လမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ စတီးလ် ပိုက်လုံးတွေကို ကျွန်မ လာနေတာမြင်လို့ ဘေးကို သေချာကပ်ပြီး ရှင်းပေးတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အလုပ်သမားတယောက်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်တယ်။
(သူရှင်းမပေးလည်း ကျွန်မ ကျော်သွားလို့ ရတယ်။ ဘေးက ကွေ့ပြီး လျှောက်လို့ရတယ်။ ဒါ့ပြင် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျော်သွားရလို့ အိနြေ္ဒပျက်မှာတွေ ဘာတွေလည်း ပူနေမယ့် အစားကို မဟုတ်ဘူး) အဲဒီ အလုပ်သမားကလည်း ကျွန်မဆီက မျက်နှာသာရနိုင်လို့၊ အခွင့်အရေးတခုခု ရနိုင်လို့ လုပ်ပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ ပင်ကိုဗီဇအရ စိတ်စေတနာကောင်းနဲ့ လုပ်ပေးတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရုံးမှာက S'porean MD က စလို့ မိန်းမတွေကို ဦးစားပေးတာ ရုံးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးအောက်က အလုပ်သမားတွေရှေ့မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သိသိမှတ်မှတ်ကို လုပ်ပြထားလို့ သူတို့မှာပါ အဲဒီ အကျင့် ကူးနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မဆိုင်သလိုနေလည်း ဖြစ်တာကို မနေကြဘဲ လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ အဲဒီ သေးသေးမွှားမွှားကိစ္စအတွက် ကျွန်မ ကျေးဇူးတင်တယ်။
ကိုအင်ဒီရဲ့ စကားလုံးကို ထပ်ပြန်ကောက်ပြီး ပြောရရင်၊ လုပ်ချင်လို့ပဲ လုပ်လုပ်၊ လုပ်သင့်လို့ပဲ လုပ်လုပ်၊ အနစ်နာခံတယ်ပဲ ပြောပြော၊ မခံဘူးပဲ ပြောပြော အဲဒီလို လုပ်နေတဲ့ (ပေးနေတဲ့) လူတွေကို ခံယူတဲ့ လူတွေဘက်က ကျေးဇူးတင်သင့် မတင်သင့် ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ မဆွေးနွေးပါဘူး။ ဒါ ခံယူတဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်သဘောအတိုင်းပါပဲ။ လုပ်ပေးနေကြတဲ့ လူတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကျွန်မ ဘယ်လိုခံယူလဲ ဆိုတာကိုပဲ ပြောတာပါ။
ခု လုပ်နေတဲ့ (ပေးနေတဲ့) လူဘက်က ပြောကြည့်ပါမယ်။ ဒါလဲ post မှာ ထည့်ရေးပြီးသားပါ။ ကိုယ်တိုင် ဘလော့ရေးနေတော့ ဘလော့ရေးတဲ့သူတွေ နေရာကပဲ ပြောထားပါတယ်။ ကျွန်မ ရေးချင်လို့ ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်သူ့အတွက်မှ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့် စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်ပဲ ရေးတယ်။ အင်္ကျီတစ်ထည် ဝတ်တာနဲ့ ဘာမှ မထူးဘူး။ ကြိုက်တဲ့လူက ကြည့်ပြီး နှစ်သက်ကြည်နူးနေမှာပေါ့။ မကြိုက်တဲ့လူက မျက်စေ့စပါးမွှေးစူးနေမှာပေါ့။ ကျွန်မကတော့ ကျွန်မ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ဦးစားပေးလို့ လုပ်တာပါပဲ။
June 8, 2010 11:47 AM
ကျွန်မ တကူးတက စာရိုက်တင်ဖြစ်နေတဲ့ မောင်သစ်ဆင်း စာတွေရော... ဘယ်သူ့အတွက်မှ အနစ်နာခံလို့ အချိန်ပေးလို့ လုပ်ပေးနေတဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီး မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ လုပ်ချင်လို့ လုပ်တာပါ။ ကိုယ့်ဘလော့မှာ ဒီစာတွေ ရှိစေချင်လို့ပါပဲ။ အဲဒါ ကျွန်မရဲ့ သူတို့အပေါ် နှစ်ခြိုက်တာ၊ သူတို့ အလုပ်ကို ဂုဏ်ပြုချင်တာတွေပါတဲ့အပြင် ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မရဲ့ blog ID ကို ထူထောင်ချင်တဲ့စိတ်လဲ ကျိန်းသေ ငြင်းမရအောင်ပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ post တခုဖြစ်မယ့် စာမျိုး ရိုက်တင်တာ မပြောနဲ့။ side bar မှာ ချိတ်ထားတဲ့ ကိုယ်ဖတ်တဲ့ blog roll စာရင်းကစလို့ blogger နဲ့ blog ရဲ့ ID ကို ပြဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကျွန်မအတွက် အတိအကျပါတယ်)
ဒါပေမဲ့ ဂျူး ဝင်းငြိမ်း အင်တာဗျူး တင်တုန်းက hit သိသိသာသာ တက်ပေမယ့် မောင်သစ်ဆင်းစာတွေ တင်တော့ လျော့တောင် လျော့ပါတယ်။ သို့သော် တစ်အုပ်လုံး ရိုက်တင်ဦးမှာ။ hit ဘာလုပ်ဖို့လဲ။ ထက်ဝက်လျော့ချင် လျော့ပစေ။ ရိုက်တင်မှာ။ ဘာလို့ဆို ကျွန်မက ကြိုက်တယ်လေ။ ကိုယ်လိုပဲ ကြိုက်တဲ့လူတွေ များရင်တော့ ဝမ်းမြောက်စရာပေါ့။ မကြိုက်လို့ အများစုက လှည့်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ ဝမ်းမမြောက်ဘူးပေါ့။ ဒါ့ထက်ပိုလို့ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကြိုက်စေချင်တဲ့၊ ကိုယ့်လို စိတ်ဝင်စားမှုတူတဲ့ လူတွေရှိရင် ဖတ်မိစေချင်တဲ့ စိတ်ရှိပေမယ့် ကိုယ် လုပ်ချင်တာကို လုပ်နေတာပါပဲ။ အချိန်ကုန်ခံလို့ အနစ်နာခံ ဖြန့်ဝေနေတာ မဟုတ်ရပါ။ အန္တရာယ်ကြီးပေမဲ့ တခု ပြောရဦးမယ်။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ သူလိုလူ စာအုပ် ပြန်ရိုက်ပါလား ပြောလာရင် လုံးဝ စဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့ဆို လုံးဝ မကြိုက်လို့။ (ဒီနေရာမှာ ဒီစာလေးပဲ ဖြတ်ဖတ်လိုက်ပြီး၊ ဒါ ဂျာနယ်ကျော်စုံတွဲကို စော်ကားမော်ကားပြောနေတာလို့ လာရင်လည်း လာနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သဘောထားကို post တစ်ခုမှာ အတိအလင်းရေးပြီးသားမို့ ဒါလေးပဲ ဖြတ်ဖတ်ပြီး ဘာပြောပြော ဂရုစိုက်နေမှာ မဟုတ်ဘူး)
လုပ်နေတဲ့သူအတွက်မှာ ကိုယ်လုပ်လိုက်တာက သက်ရောက်မှု တခုခု ရှိသွားပြီ၊ လူသိသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျေးဇူးတင်တာတွေရော၊ မတင်တာတွေရော၊ ဆဲတာတွေရော၊ ဆိုတာတွေရော လာမှာပဲ။ ကိုယ်လုပ်ချင်လို့ကို လုပ်တဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ အသိအမှတ်ပြုလာတာ၊ ကျေးဇူးစကားဆိုလာတာနဲ့ ကြုံရင် ဝမ်းမြောက်မိတာသာ မကဘဲ အဲဒီလူကို ကျေးဇူးတောင် ပြန်တင်မိဦးမယ်။ ကျွန်မကြိုက်လို့ ရိုက်တင်တဲ့ မောင်သစ်ဆင်းစာတွေ ဖတ်ပြီး သဘောကျတယ် ပြောရင် လာဖတ်တဲ့လူကို ကျွန်မ ကျေးဇူးတင်တယ်။
မနေ့က မမကွမ် စီဘောက်မှာပဲ ဒီ post ကို ဖတ်ပြီး zyt ဆိုတဲ့ nick နဲ့ တယောက်က လာပြောတယ်။ သူပြောတဲ့ စကားလုံးအတိုင်း ပြန်ပြောရရင်... ကျွန်မပြောတာ မှန်ပါတယ်တဲ့။ post ထဲမှာပါတဲ့ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးအကြောင်း ရိုက်တင်နေတဲ့ မရွှေမိက လာဖတ်တဲ့လူတွေကို သူကတောင် ပြန်ကျေးဇူးတင်နေသေးတာ တဲ့။ ဒီသဘောတရားက ဘာမှ အကျယ်ပြောစရာမလိုဘဲ နားလည်နိုင်ပါတယ်။
လုပ်တဲ့သူတွေဘက်က ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်ချင်လို့ လုပ်ချင်တာကို ရွေးလုပ်နေပြီး၊ မလုပ်ချင်တော့တာနဲ့ ရပ်လိုက်လို့ရတာကို ဘယ်သူ့ ကျေးဇူးတင်ခံနေချင်ရမလဲ။ ဘယ်သူ့ခေါင်းထဲမှာမှ အဲဒါမရှိဘူးလို့ ယုံကြည်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ခံချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစားသဘောနဲ့ လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါ သူ့လမ်းကြောင်းပဲ။ သူ့ခံယူချက်နဲ့ အဆင့်အတန်းပါပဲ။
June 8, 2010 11:48 AM
( “(ဥပမာ) လုပ်အားပေးတဲ့သူတွေ ဘလော့ရေးတဲ့သူတွေက အားယားနေလို့ လုပ်တာ စိတ်အပန်းဖြေလုပ်နေကြတာ နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူတွေက သူ့ခံယူချက်နဲ့မို့ သူလုပ်နေတာ ကျေးဇူးတင်စရာ မလိုဘူး” လို့ ယူသွားမည့်လူတွေ ရှိနိုင်တာ ကိုယ်တွေ့ပဲလေ)
အဲလို ခံယူသွားအောင်လို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပြောလိုက်ရင်တောင် ဘယ်သူက နားယောင်ပါလိမ့်မလဲ လို့ ဆက်တွေးနေမိတယ်။ ထားပါတော့။ ဘယ်သူမှတော့ နားမယောင်ပါဘူး ဆိုတာ ကိုအင်ဒီလည်း သိပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းကို တလွဲကောက်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲလို ကောက်ယူတဲ့လူတွေရှိတာကို ဘာမှ မတတ်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့ အတွေးအမြင်အတွက် ဘာလုပ်ပေးလို့မှ မရဘူးလို့ပဲ ယူဆမိတယ်။ မင်းကိုနိုင် ကိုတောင် ယောအတွင်းဝန်လို ပြောလိမ့်မယ်လို့ ကြည်ညိုစိတ်နဲ့ ထင်နေကြတဲ့လူတွေ ရှိနေသေးတာပဲ။ (ယောအတွင်းဝန် မြင်းထိန်းငတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ လုပ်လိုက်တဲ့ အကွက်ဟာ ကလေးကလားပါလားဆိုတဲ့ အတွေးမရှိဘူး။ ကျောင်းပြဋ္ဌာန်းစာမှာတောင် ပါလာသေးတာ ဒါထည့်ပြောလိုက်ရင် ဟုတ်လှပြီလို့ပဲ တွေးတယ်)
နောက်တခုက ကျေးဇူးတရားနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ကိစ္စမှာ ဘာလို့ အဲဒီလို တလွဲကောက်ကြသလဲ။ ကျွန်မစဉ်းစားမိသလောက်က ဆိုလိုရင်းကို သေချာမစဉ်းစားနိုင်တာထက်၊ မစဉ်းစားချင်တာ နဲ့ သူများကို နှိပ်ကွပ်ချင်စိတ် များနေလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ- ဗမာဝတ်စုံ ဝတ်ခြင်း၊ မဝတ်ခြင်း။ ဝတ်တဲ့လူတွေ၊ ဝတ်သင့်တယ်လို့ ထင်တဲ့လူတွေဟာ သူတို့ဘာသာ ဝတ်ချင်လို့၊ ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်လွန်းလို့ ဆိုတာထက် ဒါကို နင်းပြီး မဝတ်တဲ့လူတွေကို ဆော်ချင်တဲ့ စိတ်က ဦးဆောင်တယ်။ ဒီလိုပဲ ခုကိစ္စမှာ သူများကို ကျေးဇူးတင်တတ်တာထက် လိုရာဆွဲပြီး ဆော်ချင်တဲ့ စိတ်က ဦးဆောင်နေတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင် ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ် ဖြစ်ပေါ်ဖို့ (ကျေးဇူးစကားဆိုဖို့ မဟုတ်) ဆိုတာ ဘာခက်သလဲ။ အထူးသဖြင့် ကိုအင်ဒီပြောသလို အရိုးစွဲနေတတ်တဲ့ ဗမာတွေမှာ ဘာခက်သလဲ။ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားအရ၊ ဓလေ့ထုံးစံတွေအရ အလိုလို ကျင့်သားရနေကြတာပဲ။ နောက်တခု စေ့စေ့စပ်စပ် ထပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်စိတ်ဟာ ဘယ်ကနေ ဖြစ်လာသလဲလို့။ ပုထုဇဉ်မှန်သမျှအတွက် ကိုယ်ကျိုးအတ္တကို ပြည့်စုံစေတဲ့အတွက် ကျေနပ်မိတဲ့စိတ်က ဖြစ်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့် စိတ်သဘောနဲ့ တွေ့တဲ့ အရေးကိစ္စတွေ လုပ်ဆောင်ပြတာ တွေ့ရတဲ့အခါ ဖြစ်မယ်ပေါ့။ ဆရာဝန်တွေ၊ ကျောင်းဆရာတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြ လေးစားကြတာ အဲဒီသဘောတရားရဲ့ အပြင်ကို ထွက်သွားတာ ဘာရှိလို့လဲ။ ဆိုတော့ ကျေးဇူးတင်မိဖို့ တင်တတ်ဖို့ဆိုတာ အတ္တရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် ဘာများခက်လို့လဲ။ မတင်မိဖို့သာ ခက်တာပါ။
ညီလင်းဆက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ညီလင်းဆက်လောက်မှ မဟုတ်တဲ့ဟာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ညီလင်းဆက်ထက် မကတဲ့ဟာပဲ ဖြစ်ဖြစ် (ဒီနေရာမှာ နာမည်အစား နောက်ပိုင်းမှာ နာမ်စားပြောင်းသုံးလို့ရတယ်။ တမင်ကို အဲဒီနာမည်ကို3ခါတိတိ ထည့်ချင်လို့ ထည့်ရေးတာ) သူတို့ ကျေးဇူးတင်စရာရှိတာ တင်ဖို့ ဘယ်သူကမှ ဝေဖန်စောကြော၊ တွန်းအားပေးထောက်ပြနေဖို့မလိုပါဘူး ထင်မိတယ်။
ကျေးဇူးတင်ရတာထက် ခက်ခဲတာ၊ လေးနက်တာ၊ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်သင့်တာက ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ အမှုကိစ္စတစ်ခုကို ကိုယ့်အပေါ် ပြုဖူးသူအပေါ် သူလိုအပ်ရင် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပြန်ဆပ်နိုင်ဖို့ရယ်၊ ကိုယ့်ကို ကျေးဇူးပြုဖူးသူအပေါ်မှာ တိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်ဖို့ မလိုရင်တောင် အဲဒီ အမှုကိစ္စကို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကိုယ်ကနေ လက်ဆင့်ပြန်ကမ်းနိုင်ဖို့ရယ်သာ ခက်တာပါ။
ညီလင်းဆက် စလိုက်တဲ့ ကိစ္စကနေ ကျေးဇူး ကျေးဇူး ကျေးဇူး တင်တတ်ရမယ်လို့ မိုးမွှန်အောင်ပြောနေတဲ့လူတွေ ကိုယ့်ဘာသာ လွယ်တာပဲ လုပ်နေသလား၊ မလွယ်တာပဲ လုပ်နေသလားဆိုတာ ပြောနေမယ့်အစား စဉ်းစားကြည့်တာ ပိုကောင်းမယ် ထင်မိတယ်။
ကိုအင်ဒီ comment ကို ပြန်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာလဲ ပြန်စဉ်းစားမိသွားတဲ့ အတွက် ပတ်သတ်ရာ ပတ်သတ်ကြောင်းများကို ကျေးဇူးဥပကာရ အထူးတင်ပါကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ :)
comment ရေးခဲတဲ့ ကိုအင်ဒီဆီ တကူးတက ရေးသွားတဲ့ comment ရလို့လည်း တကယ်ဝမ်းမြောက်မိတာ ပြောချင်ပါတယ်။
(စာ ရေးပုံရေးနည်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ကတော့ ကလေးကို ပြောသလိုပဲ ရေးရေး၊ ဓမ္မာစရိယကို ပြောသလိုပဲ ရေးရေး နားမလည်တဲ့လူက လည်ကို မလည်ဘူး၊ အရိုးစွဲနေတဲ့လူက စွဲကိုစွဲနေမှာပဲ ဖြစ်လို့ သိပ်မထူးဘူး ထင်မိပါတယ်။ အတိုက်အခိုက်က ဘယ်လိုရေးရေး ဘယ်လိုလုပ်လုပ် လွတ်မှာမဟုတ်တဲ့ တူတူတော့ ကိုယ် အာရုံလာသလိုပဲ ဆက်ရေးမယ်။ အဲဒီ အတွက် စာဖတ်သူကို မလေးစားတာတွေ၊ ထည့်မတွက်တာတွေ ပြောလာခဲ့ရင်လည်း ခံပါတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ဘလော့ရေးတာ ဘယ်သူ့အတွက်မှ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်လုပ်ချင်လို့ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ပါပဲ။
ဒါဖြင့် ရေးပြီး ဘယ်သူ့မှ ပြမနေနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာ သိမ်းထားလို့ ပြောလို့လည်း မရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ကိုယ်ရေးတာကို သူများ ဖတ်စေချင်တာ၊ ပြချင်တာကိုက ရေးသူရဲ့ အတ္တနဲ့ ယှဉ်တဲ့ ဆန္ဒပဲ။ သူရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှု အတွက်ပဲ။ ဒါကိုမှ မကျေနပ်လို့ လာမဖတ်ကြလည်း ဘာမှ မတတ်ပါ။ မရေးဘဲ မတင်ဘဲတော့ နေမှာမဟုတ်လို့ ပြောလိုပါတယ်)
ကိုအင်ဒီရဲ့ comment ကို ပြန်တာ ဖြစ်ပေမယ့် တချို့ အကြောင်းအရာနဲ့ စကားလုံးတွေက ကိုအင်ဒီကို မရည်ရွယ်ဘူးဆိုတာ နားလည်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, June 9, 2010
Labels: sharing Comments: (86)
ကျေးဇူးရှင် မှိုလိုပေါတဲ့ လောကကြီးအလယ်မှာ
အခုတလော “ကျေးဇူးရှင်၊ ကျေးဇူးခံ၊ ကျေးဇူးစား၊ ကျေးဇူးစကား” ဆိုတာတွေ ကြားနေ တွေ့နေ ဖတ်နေရတယ်။ “ကျေးဇူး”ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဝင်းဖေ ရေးသားတဲ့ “မျက်မှန်” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးတပုဒ်ကို အရင်ဆုံး ပြေးသတိရမိပါတယ်။ ကိစ္စရပ်ကလေးတခုအတွက် ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးတာအပေါ် မပြီးနိုင်မစီးနိုင် အသားယူရင်း လိုတာထက်ပိုပြီး အခွင့်အရေးတွေယူနေတဲ့ လူတယောက်အကြောင်းနဲ့ အဲဒီဒဏ်ကို သည်းမခံနိုင်တော့လို့ ပေါက်ကွဲထွက်ရသူတယောက်အကြောင်း ကလောင်သွက်သွက်နဲ့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပေါ်လွင်အောင် ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ဝတ္ထုတိုတပုဒ်ပေါ့။
မှန်ပါတယ်။ တချို့လူတွေဟာ သူ့ကျေးဇူးလေး နည်းနည်းလောက် ရှိခဲ့ဖူးရင်ပဲ တဖက်လူက တသက်လုံး အသက်ပေးပြီး ဆပ်ရတော့မယ့် အပေါက်မျိုး ချိုးတတ်တာ တွေ့ရဖူးတယ်။
တချို့လူတွေကျပြန်တော့ သူ့သဘောနဲ့သူ ဇွတ်အတင်းအဓမ္မ ဝင်ကူညီပြီး တဖက်လူရဲ့ ကျေးဇူးတင်တာကို အချောင် ခံချင်ကြတာမျိုးလည်း ရှိသေးတယ်။
ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။။ “တိုင်းပြည်ကြီး ချောက်ထဲကျတော့ဖို့ လက်တလုံးအလိုမှာ အချိန်မီ ဝင်ပြီး ကယ်တင်လိုက်ရတယ်”….ဆိုတာမျိုးလေ။ အသားလွတ်ကြီး ကယ်တင်ရှင်အပေါက်မျိုး ဝင်ချိုးနေတာ။ ဒါမျိုးက နအဖ သာလျှင် မဟုတ်။ တော်လှန်ရေးသမားဆိုသူတွေထဲမှာလည်း ဒီအချိုးမျိုးနဲ့ လူတွေ တပုံကြီးရှိနေပြန်တယ်။ “မင်းတို့ ထောင်ကျခံခဲ့ဘူးလို့လား။ ငါတို့လောက် ပေးဆပ်ခဲ့ရဘူးလို့လား”…စသဖြင့်ပေါ့လေ။
ဒီလိုလူမျိုးတွေ ဘာကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာရသလဲလို့ အကြောင်းရင်းကို စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။
ကျနော့်အထင်မမှားဘူးဆိုရင်တော့ “ကျေးဇူးသိတတ်တာဟာ ကောင်းတယ်” ဆိုတဲ့ အယူအဆကနေ အစပြုတယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။ ဒီအယူအဆကို လူမျိုးဘာသာမရွေး လက်ခံကျင့်သုံးကြတာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆိုရင် ကျနော်တို့တွေဟာ မိဘနဲ့ ဆရာသမားကို အနန္တောအနန္တငါးပါး ဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင်တွေဆိုပြီးတော့ ပူဇော်ကန်တော့ကြတယ်။ ပူဇော်ထိုက်သောသူကို ပူဇော်ခြင်း၊ သူ့ကျေးဇူးကို သိတတ်ခြင်း ဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ အဲဒီအထိကတော့ ဟုတ်နေပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့မှာ ဘယ်အချိန်ကစပြီး ရလာခဲ့တဲ့ အလေ့အထ မှန်းတော့ မသိဘူး။ ကိုယ့်ကို ပညာသင်ပေးတဲ့ ဆရာတွေကိုသာမက တခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ လူတွေကိုပါ တွေ့ကရာ“ဆရာ” တပ်ပြီး ခေါ်နေကြတာကို တွေ့ရတယ်။ ဥပမာ ဆရာဝန်ကိုလည်း ဆရာလို့ပဲ ခေါ်တယ်။ စာရေးဆရာကိုလည်း ဆရာပဲ။ သတင်းသမားတွေကိုလည်း သတင်းစာဆရာပဲ။ ကားမောင်းတဲ့လူကိုလည်း ကားဆရာ၊ အသံချဲ့စက်ဖွင့်တဲ့လူကိုလည်း စက်ဆရာ၊ ပန်းပဲထုတဲ့လူကို ပန်းပဲဆရာ၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဆိုက်ကားနင်းတဲ့ လူကိုတောင် ဆိုက်ကားဆရာလို့ ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ (ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူထုစိန်ဝင်းက ဆောင်းပါးတပုဒ်ရေးဖူးပါတယ်။)
အဲဒီမှာတင် ဇာတ်လမ်းက နည်းနည်းရှုပ်လာပြီး ရောထွေးမှုတွေ စဖြစ်လာတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဆေးကုပေးရင် ကုသခကို “ဉာဏ်ပူဇော်ခ” လို့ ခေါ်လာကြတယ်။ အစိုးရဆေးရုံက ဆရာဝန်မို့ ဆေးကုသခ ပေးစရာမလိုရင်တောင် ကျေးဇူးတင်လို့ဆိုပြီး လက်ဆောင် ပေးချင်ကြတယ်။ အဲဒီလက်ဆောင်ကိုလည်း “ကန်တော့လက်ဆောင်” လို့ ခေါ်ကြပြန်တယ်။ (နောက်ပိုင်း ကန်တော့လက်ဆောင် တွေ အဖြစ်ကနေ မူလသဘာဝ ပျောက်ပျက်ပြီး အဆုံးသတ်မတော့ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေအတွင်းမှာ အဓိက လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ နည်းလမ်းကြီးတခုအဖြစ် ဆက်လက် အသုံးတော်ခံနေပါတော့တယ်။)
အလားတူပဲ…. “စာရေးဆရာ” တွေကိုလည်း စာမူခပေးတယ်ဆိုရမယ့်နေရာမှာ ဉာဏ်ပူဇော်ခဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုပဲ သုံးစွဲကြတယ်။ သတင်းစာဆရာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ထို့အတူပဲ။ ဒါတွေဟာ ဝေါဟာရ သက်သက်ပဲ။ သိပ်အရေးမကြီးပါဘူးလို့ ထင်မယ်ဆိုရင်လည်း ထင်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအလေ့အထကြီးဟာ ကျနော်တို့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကြားထဲမှာ ကြာရှည်မြင့်စွာ အမြစ်တွယ်လာတဲ့အခါ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာဝန်၊ စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာ စတဲ့ လူတွေကို ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေလို့ ကျနော်တို့တွေက အမြင်မှာပါ မသိလိုက်မသိဘာသာ စွဲထင်မှတ်ယူလာတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီလူတန်းစားအသီးသီးမှာ လူကောင်းသူကောင်းတွေပါသလို အကျင့်မကောင်းတဲ့လူတွေလည်း တပုံကြီးရှိနေတယ်။ အကျင့်မကောင်းပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဲဒီနယ်ပယ်ထဲမှာ ရောက်နေတဲ့လူတွေကို သူ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ထောက်ပြီး ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေသဖွယ် ဆက်ဆံနေရမှာတော့ သဘာဝ မကျဘူးပေါ့နော်။
နအဖ အစိုးရ တက်မလာမီခေတ်ကလည်း မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့ ဝါဒဖြန့်ချီရေး ကောင်းမှုကြောင့် တောင်သူလယ်သမားတွေဟာ နေရင်းထိုင်ရင်း ကျနော်တို့ရဲ့ အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်တောင်သူဦးကြီးတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် လယ်သမားတွေနဲ့အတူ ရွှံ့ထဲမှာ ဒိုးတူပေါင်ဖက် ရုန်းနေကြတဲ့ နွားသတ္တဝါတွေကိုတောင် ကိုယ့်ရဲ့ အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင်လိုလို ပြောလာကြတော့ လမ်းမှာ နွားတွေ့ရင်ပဲ ထိုင်ကန်တော့ရမလို ဘာလိုလို ဖြစ်လာတယ်။
ထားပါတော့။ ကျေးဇူးခံ၊ ကျေးဇူးစားလူတွေဖက်က မင်္ဂလာတရားနဲ့အညီ ကျေးဇူးတင်တယ်ပဲ ထား။ အဲ….. ကျေးဇူးရှင်တွေဖက်ကလည်း ကြာလာတာနဲ့အမျှ အကျင့်ပျက်ပြီး နည်းနည်းပါးပါး စိတ်ကြီးတော့ ဝင်လာကြတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ကိုယ့်ဆန္ဒအလျောက် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို ဝတ္တရားအရ လုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာတောင် နေရင်းထိုင်ရင်း ကျေးဇူးတင်ခံချင်တာမျိုးတွေ ရှိလာကြတယ်။ ပြည်သူ့အတွက်တို့၊ စာဖတ်ပရိသတ်အတွက်တို့၊ လူအများအတွက်တို့ စတဲ့ စကားတွေနဲ့ အသံကောင်းဟစ်လာကြတယ်။
သူ့ဘာသာသူ သေနတ်ကိုင်ချင်လို့ လက်ယားပြီးတော့ တပ်ထဲဝင်သွားတဲ့သူတွေကလည်း “အသက်သွေးချွေး စဉ်မနှေး၊ ပေးဆက်သည်မှာ တပ်မတော်ပါ” ဆိုတာမျိုး အော်လာကြတယ်။
တကယ်ကတော့ လူတယောက်ဟာ သူ့အလုပ်ကိုသူ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင်နေသရွေ့ သူ့အကျိုးအတွက်ရော၊ အများအကျိုးတွက်ရော သယ်ပိုးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်သားကလည်း စစ်သားအလျောက်၊ ဈေးသည်ကလည်း ဈေးသည်အလျောက်၊ အင်ဂျင်နီယာကလည်း အင်ဂျင်နီယာအလျောက်၊ အိမ်ရှင်မကလည်း အိမ်ရှင်မအလျောက်၊ လှေသမားကလည်း လှေသမားအလျောက်၊ ဆရာဝန်ကလည်း ဆရာဝန်အလျောက်၊ ကျောင်းဆရာကလည်း ကျောင်းဆရာအလျောက် သူ့နည်းနဲ့သူ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ညီတူညီမျှ ကျေးဇူးပြုနေကြသူတွေချည်းပါ။ မယုံလို့ရှိရင် ဈေးသည်တွေ၊ အိမ်ရှင်မတွေ မပါဘဲ စစ်သားတွေ၊ ဆရာဝန်တွေ၊ ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ချည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်ကြည့်ပါ။ (ချွင်းချက်အနေနဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေ မပါဘဲ လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး အေးချမ်းသာယာမှုတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ရမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။)
ဒီတော့ တခုခုကို လုပ်တယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးတင်ခံချင်လို့ လုပ်တာထက် ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုအလျောက်၊ ကိုယ့်ဝါသနာအလျောက်၊ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုအလျောက်၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အလျောက်၊ လုပ်တာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညီလင်းဆက်တို့ ရီတာတို့ရဲ့ အယူအဆကို သဘောကျ နှစ်ခြိုက်မိပါတယ်။
ကျေးဇူးခံ၊ ကျေးဇူးစားတွေဖက်က ကြည့်ရင် ကျေးဇူးတင်တာဟာ မကောင်းဘူးလားဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးမသိတတ်သူ၊ ကျေးဇူးကန်းသူအဖြစ်ထက်စာရင် ကျေးဇူးသိတတ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးကို ဘယ်လို ပြန်ဆပ်မလဲ။ ဆပ်ပုံဆပ်နည်း နည်းလမ်းကျဖို့တော့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ နောက်တပို့စ်မှာကျမှ ကျေးဇူးဆပ်ပုံဆပ်နည်းတွေအကြောင်း ကျနော်တွေးမိသမျှ ထပ်ရေးပါဦးမယ်။
(၁) မျက်မှန် (ဝင်းဖေ)
(၂) ထက်ထက်မိုးဦး တကယ်ပဲ မလွန်ဘူးလား (ညီလင်းဆက်)
(၃) One Minute Interview (Ritako)
(၄) ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ (ဝီရှီမီ)
(၅) ကျေးဇူးတရား self-ownership and all that (ဝတုတ် -zizawa)